Jubbaland oo ka hadashay ciidamo la geeyay magaalada Doolow - Home somali news leader
Real Madrid top La Liga after beating Barcelona 2-1 in ‘Clasico’
Blackmore makes history as the first female jockey to win the…
Prince Philips’ funeral will be held at Windsor Castle on April…
Amazon won in Alabama but still faces opposition in Europe
Saudi Arabia announces execution of three soldiers for “high treason”
Home NEWS Jubbaland oo ka hadashay ciidamo la geeyay magaalada Doolow
Jubbaland oo ka hadashay ciidamo la geeyay magaalada Doolow
Dowlad goboleedka Jubbaland ayaa war kasoo saartay ciidamo shalay ay dowlada federalka geysey degmada Doollow ee gobolka Gedo.
Maamulka Jubbaland ayaa ku eedeeyay Madaxweyne Farmaajo inuu doonayo in colaad uu ka huriyo gobolka Gedo.
WarSaxaafadeed ka kasoo baxay Maamulka Jubbaland ayaa sidaan u qornaa:
Jubaland waxaa ka jirta xaalad abaarreed oo ba’an, dhalisayna khasaare balaaran oo naf iyo maalba leh. Waxa isbuucyadii la soo dhaafay lagu hawlanaa sidii wax looga qaban lahaa dhibaatada soo food saartay shacabka ku dhaqan deegaanada Jubaland.
Haddaba, ayadoo ay taasi jito ayaa waxaa nasiib darro ah in halki Dowladda Federaalku doorkeeda ka geysan lahayd wax kaqabashada dhibaatadaas, inay gobolka Gedo ku sii daabulayso hub, ciidan iyo gaadid dagaal.
Waxa shalay 0o taarikhdu ahayd 19 Maarso 2021, hub, gaadid dagaal iyo ciidan laga dejiyey deegaanada Daawo ee gobolka Gedo, oo awalba la il daraa maleeshiyaad Dowladu Federaalka halkaasi geysay oo dagaallo ka riday, una geystay shacabka deegaankaas boob iyo barakicin. Waxaa iyana ayaan darro ah in ayadoo waddanku ku jiro xili kala guur ah, dhammaadayna muddo0 xileedkii Madaxweynaha Federaalka iyo Goleyaasha Sharci-dejintu, cid walba oo Soomaaliya danaynaysana ay ku baaqayso in diiradda la saaro wada hadal lagu dhammaystirayo caqabadaha hortaagan qabsoomidda doorasho lo0 dhan yahay, uu Madaxweynaha waqtigiisii dhammaaday weli ka waantoobi la’ yahay dagaal oogid, abuuridda carqalado hor leh iyo ku tumashada dastuurka iyo sharciga dalka u yaalla.
Arrimahaas ayaa looga gol leeyahay jabinta heshiis kasta oo looga gudbi lahaa si mari waaga jira.
Haddaba, Dowlada Jubaland waxay caddaynaysaa in masuliyadda wixil ka dhasha gulufkaas colaadeed uu qof ahaan u yeelan doono Madaxweynaha muddo xileedkisi dhammaaday ee Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, ayna noqon doonto xadgudub aan waligiis ka harin.
Previous articleWadankee sanadkan ku guuleystey dalka ugu farxada badan caalamka?
Next article‘We will not be silent,’ Biden, Harris promises after attacks on Asian Americans
Ciidamo Miino Baaris ka sameeyay wadada isku xirta Jowhar iyo Balcad (Sawiro)
Baaritaankii dilkii Guddoomiyihii hore ee degmada Hodon oo la soo gabagabeeyay
Isbitaalka Martini oo dib u bilaabaya adeeggii caafimaadka guud